Qorichi 'Statins' jdhamu cooma hir'isuuf oolu 'nama lama keessa tokkoof hin hojjattu' jedhame - BBC News Afaan Oromoo
Qorichoonni 'statin' kan cooma (cholestrol) qamaa keenya keessa hir'isuuf oolu guutummatti haala gahaa ta'een akka hin tajaajillee qorannoon tokko ibse.
Namoonni biyya UK keessa jiraatan hedduun qoricha kana ni fayydamau.
Qoratoonni UK dhukkubsatoota 165,000 ta'aan qorichaa 'statins' fayyadamaan irratti qorannoo geggeessaniin; lama keessaa tokko sabaaba dhukkubbii onneetiin kolostiroolii badaa kan jedhamuurraatti humni fayyissuusaa xiqqaa akka ta'e himu.
Isaan maaliif qorichoonni 'statins' qorichoota biraarraa akka fayyadaan hin beekan.
Dhukkubsatoonni qorichoota kanneen ajaaja doktoraan malee fudhachu hin qaban.
Kana jechuun immoo namoonni qorichoota isaanii ajaajame seeraan hin fudhataan yookiin doktoroonni hamma barbaachisuu gadi kennu jechuudha, jedhu qoratoon kun.
Dhukkubbiin onnee UK keessatti waggaatti namoota 150,000 ta'an ajjeessa.
"Bad" low-density lipoprotein (LDL) kan jedhamu kun ka'uumsa dhukkubbii onneetiif sabaaba guddaadha-kunis cuufamuu hidda dhiigaatiif nama saaxila.
Tanboo xuuxuufi furdina garmalee
Coomaa qamaa keenya keessa jiru hir'isuun gosa kolostiroolii badaa jedhamu hir'isuuf ni fayyada, garuu namoonni hedduun ammas qoricha fayyadamu qabu. Sabaaba kanaan UK keessatti namoota baay'eef 'statins' ni kennama.
Ta'uus garuu itti fayyadamaan 'statin' dhiibbaa cinaacha qabachuu isaaniitiin dhukkubsatoota akkamiitu isa fayyadamuu qaba kan jedhu mormii qaba.
Akka qoratoonni jedhanitti aragnoowwan hanqina akka qaban ibsuun, dhukkubsatoonni qorichoota kanneeniif haala eegamuun deebii kennu dhabuu isaani himu. Sabaabni biroo akka tanboo xuuxuufi furdinni garmalee dhukkubbi onneef nama saaxilu.
Qorataa yunivaarsitii Nottiingahaam kan ta'an Dr Isteefaan Weeng akkas jedhu: "Akka qorannoon keenya agarsiisutti dhukkubsatoonni walakka ol 'Statins' ajaajameefi, jijjiirama guddaa fidanii jiru akkasumas dhukkuba onneef saaxilamuun isaanii hir'ise jira.
"Ta'uus garuu, muraasni keenya- sabaaba jiinii keenyaas, dhiibbaa cinaachaa, yaalarra chiichuu yookiin qorichoota biraarratti- faayidaa barbaannu san hin arganne."
'Yaada wal makaa'
Akka qorannoon ibsutti, dhukkubsatoota qorichoota Sataatiinii haala gaarii qaamni isaani deebii hin kennineef qorichoota dhiibaan isaani gad aanaa ta'etu kennama.
Waldaa Onnee Biritiishitti dayireektaara kan ta'an Profeesaar Meetiin, "Sataatinoonni baay'ee barnbaachisoodha. Akkasumas kolostiroolii qaama hir'isuufi saaxilamumaa dhukkubbii onneetiif yookiin Istirookiif qabnu hir'isuuf gahe guddaa taphatu."
"Yoo ani qoricha sii ajaaje akkaata sii ajaajeen fudhachuu qabda, itti fuufte fayyadamuun sirra jira. Yaaddo qabda tanaan doktora kee waliin mai'achuu qabda. Yeroo amma kolostiroolii hir'isuuf qorichoonni biroos jiru, tasa dhukkubbii keetiif qorichoota biraatu haala gaarii hojjattu ta'a yookiin filannoo kee."
"Yoo qoricha ajaajnu, akka dhukkubsatoonni haalaan fayyadaman itti himna. Kana jechuunis doozii kennameefi yeroo qorichi kenname fayyida barbaannu agargamsiisa jenne yaannutti." jedhu profeesaar Heeleen Istookiis, dura teessu 'Royal College of GP' kan ta'an.
"Sabaaboota walxaxatu jira kan dhukkubsatoonni qoricha ofisaaniin kan hin filanneef. Akkasumas yaadota wal makaa sataatiinii irratti jiraanis sabaaboota saniini keessa isa tokko."